जैमिनी नगरपालिकाका मेयर पाैडेल ।
काठमाडौं— केही समयअघि ‘पिर्के सलामी’ नेपाली समाजमा भाइरल भएको थियो । ठाउँठाउँमा जनप्रतिनिधिहरु पिर्कामा रातो कपडा ओछ्याएर पिर्कामा चढेर सलामी लिइरहेका भेटिन्थे ।
कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर शाहीले त कुनै एक ठाउँमा जाँदै गर्दा बाटोमा नै पिर्कामा रातो कपडा बेरेर सलामी लिएका थिए । सामाजिक सन्जालमा उनको तस्वीर भाइरल भएको थियो, पिर्के सलामीको उच्चतम नमूनका रुपमा यसलाई हेरिएको थियो ।
जनप्रतिनिधिमात्र होइन, हुम्लामा १० भदौमा न्यायाधीश चन्द्रकान्त पौडेलले पनि पिर्के सलामी लिएका थिए । उनको यो कदमको पनि व्यापक विरोध भएको थियो ।
जनप्रतिनिधि तथा अन्य व्यक्तिहरुले यसरी पिर्के सलामी लिँदा आफूलाई राजा मान्ने गरेको विषयमा पनि चर्चा भइरहेको थियो ।
केही समय यो क्रम हरायो ।
तर, फेरि पिर्के सलामीको अर्को नमूना देखिन थालिएको छ ।
प्रसंग हो, बाग्लुङको जैमिनी नगरपालिकाको । नगरपालिकामा प्रथम नगर स्तरीय राष्ट्रपति रनिङ सिल्ड प्रतियोगिताको उद्घाटन थियो, शनिबार । नगपालिकाका मेयर इन्द्रराज पौडेल कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि थिए ।
उनी आयोजकले बोलाएको समयमा नै खेलकुद हुने ठाउँमा पुगे । त्यहाँ उद्घाटनको तयारी हुँदै थियो ।
सबै कार्यक्रम सकिएपछि मेयर भएको तिर खेलाडीहरु लामबद्ध भएर आए ।
अनि अचानक मेयर पौडेललाई वरपरबाट कानेखुसी गरियो । त्यहाँ भएका अन्यले एउटा टेबल ल्याएर दिए । अनि मेयर टेबलमा चढे । र, लिए ‘टेबले सलामी’ ।
लामो समय यो विषयमा भएको व्यापक विरोधपछि पनि मेयर पौडेलले किन टेबलमा चढेर सलामी लिने निर्णय गरे त ? शनिबार साँझ फरकधारसँगको सम्पर्कमा आएका मेयरले सुरुमै भने, ‘त्यै त नि हेर्नु न, फेसबुकमा त फोटो भाइरल भइरहेको रहेछ ।’
अनि उनी आफैंले थपे, ‘मैले पनि फेसबुकमा नै यसको प्रष्टीकरण चाहिँ लेखिसकेको छु ।’
हो, मेयर पौडेलले फेसबुकमा एउटा स्टाटस लेखेका छन् । यो समाचार तयार पार्दासम्म मेयर पौडेलको त्यो स्टाटसमा कमेन्ट र लाइक्सको ओइरो लागेको छ । मेयर पौडेलका स्टाटसमा सामन्यतया ४० को हाराहारीमा कमेन्ट आउँदा रहेछन्, यो पोस्टमा सय जनाभन्दा धेरैले कमेन्ट गरेका छन्, पचासभन्दा बढीले स्टाटस सेयर गरेका छन् ।
स्टाटसमा मेयरले लेखेका छन्– टेबुल मैले जान्दछु, त्यो मेरो रहर होइन ।
थाहा हुँदहुँदै पनि मेयरले टेबलमा चढेर सलामी किन लिए त ?
‘अब हेर्नुस्, खेलकुदको कार्यक्रम थियो त्यो,’ पौडेलले फोनमा भने, ‘अब खेलकुदको कार्यक्रममा आएका एमपायरहरुले नै भने कि टेबलमा चढ्नै पर्छ । टेबलमा चढेमात्र खेलाडीको अपमान हुँदैन, नत्र भुइँबाट सलामी लिँदा खेलाडीको अपमान हुन्छ भनेर उहाँहरुले नै नजिकै रहेको टेबल ल्याउनु भयो, एम्पायरले भनेको कसरी गलत होला भन्ने लाग्यो र म चढेँ ।’
त्यति बेला आफूलाई यसअघि पिर्का र टेबलमा चढेर लिइएका सलामीबारे भएका आलोचना र प्रतिक्रियाको कुनै हेक्का नभएको बताउँछन्, मेयर पौडेल । ‘भुइामा नै लिँदा पनि हुन्थ्यो,’ उनले भने, ‘तर, मनमा फेरि खेलाडीलाई त सम्मान गर्नुपर्छ नि भन्ने भयो । एम्पायरहरुले पनि खेलाडीलाई सम्मान गर्न टेबलमा नै चढ्नपर्छ भने, म चढिदिएँ ।’
अब चाहिँ यस्तो विषयमा आफू सचेत भएर अगाडि बढ्ने मेयर पौडेलले बताए ।
‘समयअनुसार चल्ने हो, अब फिल्डमा कसैले त्यस्तो गर्नैपर्छ भनेपछि त मैले मान्नैपर्यो,’ पौडेलले भने, ‘तर, धेरैले आलोचना गर्नु भएको छ, यसलाई समाजमा फरक तरिकाले बुझिँदो रहेछ भन्ने अब मैले थाहा पाएँ, अब त्यही अनुसार आफूलाई परिवर्तन गरिहाल्छु ।’
तर, आफूले आफूलाई ‘ठूलो ठानेर’ त्यसरी टेबलमा चढेर सलामी नलिएको पौडेल बताउँछन् । ‘मैले त आफूलाई त्यति बेला पनि जनप्रतिनिधि नै सोचिरहेको थिएँ,’ मेयर पौडेलले भने, ‘गाउँको राजा सोचेको होइन, मेरो अभिप्राय पनि त्यस्तो होइन, खेलाडीलाई सम्मान गर्नबाट चुक्नु हुँदैन भन्ने चाहिँ सोचेको थिएँ ।’
समाजलाई नराम्रो लाग्ने भएकाले अब परम्परा नै भए पनि यस्ता कुरा रोक्नु पर्नेमा आफ्नो धारणा रहेको पनि उनले जोडे ।
अनि अन्तिममा भने, ‘हेर्नुस्, म एकदमै समाजवादी मान्छे हुँ, यहाँ आएर जनतालाई सोध्दा पनि हुन्छ, मैले आफ्नो विवेकले होइन, एम्पायरको कुराले गर्दा यसलाई मानेको थिएँ । यसलाई अन्यथा नलिऔँ ।’